सवारी साधनका लागि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
सवारी साधनका लागि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर
काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । आगामी चैत्र मसान्तसम्म प्रदेश नं. ३ अर्थात साविकको बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा उच्चस्तरीय सुरक्षा सहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आह्वान गरेको हो ।
विभागका अनुसार सरकारी र संस्थानका सबै चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनले चैत्र मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ । त्यस्तै निजी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनतर्फ लट नम्बर १ देखि १२ सम्मले अनिवार्य रूपमा चैत्र मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नु पर्नेछ । साथै सो अवधिमा ऐच्छिक रूपमा लट नं. १२ देखि माथिका २ र ३ पाङ्ग्रे सवारीसाधनले पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सक्ने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
लट नं. १३ देखि माथिका सम्पूर्ण चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनले २०७५ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर राखिसक्नु पर्ने विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि अनलाईन आवेदन २४ घण्टा खुला राखिएको प्रवक्ता डा. पाण्डेले बताउनुभयो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणका लागि सबै तयारी पूरा भएको र प्रक्रिया पूरा हुनासाथ प्लेट प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले गत भदौ ५ गतेबाट उच्चस्तरीय सुरक्षा सहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेको थियो । भदौ ९ गतेबाट बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो ।
विभागका अनुसार नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ट नम्बर प्लेटबाट सवारीधनी र सवारीसाधनका बारेमा एकै ठाउँबाट विवरण उपलब्ध हुनेछ । राजस्व असुलीको अवस्थाका बारेमा पनि तत्काल जानकारी हुनेछ । सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै, चोरीका सवारी पूर्ण नियन्त्रण हुने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेको दाबी छ ।
इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरेपछि देशभरका सवारीसाधनको अवस्थालाई एकै ठाउँबाट निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सकिने छ । पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट राख्न यातायात व्यवस्था विभागले सुरुमै चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।
२३ प्रकारका नम्बर प्लेटलाई पाँच प्रकारमा सीमित गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीमा पहेलो प्लेटमा कालो, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो प्लेटमा सेतो अक्षर, कुटनीतिक सवारीमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
इम्बोस्ट नम्बर प्लेटका लागि ठूला सवारीसाधनलाई तीन हजार छ सय रुपियाँ, चार पाङ्ग्रेको तीन हजार दुई सय, तीन पाङ्ग्रेको दुई हजार नौ सय र मोटरसाइकलको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने छ ।
चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा अगाडि सिसाभित्र फ्राइड एण्टीना स्टीकर राखिने छ । उक्त चिप्समा सो सवारीसाधन र सवारीधनीको सम्पूर्ण विवरण राखिएको हुन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीमा पछाडिको नम्बर प्लेटमा विशेष प्रकारको कभर बनाएर चिप्स राखिएको छ । जसमा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख छ । उक्त विवरणको जानकारी लिन काठमाडौँ उपत्यकाको पाँचवटै प्रवेश नाका थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुनमा एफआरआईडी गेट राखिने छ । सो गेटबाट प्रवेश हुने सम्पूर्ण सवारीसाधनको पूरा जानकारी विभागमा जडित कन्ट्रोल कक्षमा देखिने छ ।
नम्बर प्लेट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
इम्बोस्ट नम्बर प्राप्त गर्नका लागि अनलाईनबाट फारम भर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटको पेजमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनलाईन निवेदन क्लिक गरी फारम भर्नुपर्छ । जसमा पहिलो चरणमा सवारीसाधनको नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना पठाएपछि विभागले तुरुन्तै कोर्ड नम्बर मोबाइल म्यासेजमा पठाउन्छ । प्राप्त म्यासेज फारममा पुनः टाइप गरेपछि अर्को फारम खुल्छ जसमा सवारीको सम्पूर्ण विवरण र वैयक्तिक विवरण भर्नुपर्छ ।
त्यसपछि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई पैसा बुझाएको भौचर नम्बर फारममा उल्लेख गरी अनलाईनमा पठाएपछि नम्बर प्लेट लिन कहिले र कहाँ जाने भन्ने बारेमा इमेल र मोबाइलमा म्यासेज आउँछ । म्यासेजमा तोकिएको समयमा आफ्नो सवारीसाधन लिएर गएपछि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ । अनलाईन फारममा भरिएको विवरण अनुसार इम्बोस्ट नम्बर छापिने छ । छापिएको नम्बर प्लेट विभागले सम्बन्धित कार्यालयमा तोकिएको समयमै पठाउने छ ।
12/16/2017 12:58:00 PM